AmaGeofumadas ami - amaGeofumadas
Curiosities, uphenyo kanye ezintsha
IGeofumadas - ekuhambeni kulo mzuzu wedijithali
Ukuthi i-Going Digital ingaguqula kanjani izinselelo zakho zobunjiniyela Izindawo zedatha ezixhunyiwe azikhulumi nje ngodaba, zibuye zehle ngomgwaqo kumaphrojekthi akho wokwakha. Cishe bonke ochwepheshe bezobunjiniyela, bokwakha nokwakha (i-AEC) bagxile ekutholeni izindlela ezintsha zokwengeza amamajini nokunciphisa isikweletu ...
IGeo-Engineering neTwinGeo Magazine - Uhlelo Lwesibili
Besiphila umzuzu othakazelisayo wokuguqulwa kwedijithali. Kuzo zonke iziyalo, izinguquko zidlulela ngaphezu kokushiya iphepha kalula ekwenzeni lula izinqubo ekufuneni ukusebenza kahle nemiphumela engcono. Umkhakha wezokwakha uyisibonelo esithandekayo, esiqhutshwa izikhuthazo ezizayo ezizayo ezifana ne-Intanethi ...
Siphila umzuzu okhethekile lapho kuhlangana khona imikhakha esehlukaniswe iminyaka. Ukuhlola, ukwakhiwa kwezakhiwo, ukudweba kolayini, ukwakheka kwesakhiwo, ukuhlela, ukwakhiwa, ukumaketha. Ukunikeza isibonelo salokho okwakugeleza ngokwesiko; ilayini yamaphrojekthi alula, iterative futhi kunzima ukuyilawula ngokuya ngosayizi wamaphrojekthi. Namuhla, ngokumangazayo ...
Ingabe singenele ngempela inqubo "entsha" uma kuziwa kwi-3D Spatial?
"Ukucindezelwa kwenkinobho kunamandla okuvula esinye isici," kubhala, ngasekupheleni kwendatshana yakhe, uMuthukumar Kumar, ebhekisa ngqo ekwakhiweni kwezindawo ze-3D, usizo lwayo, ukubaluleka kwayo nekusasa. Qaphela ukuthi ukukhuluma ngekusasa, ngendlela esusa kude ne-charlatanism elula, kuyadingeka ukuthi leli gama libe ...
Geospatial - GIS, Innovations, egeomates yami
Ukuqashelwa okuqondiswe ku-GIS. Izinganekwane eziqhathaniswa nobuqiniso
Ngemuva kokufunda i-athikili eqala ngokuzibuza ukuthi abaqashi be-GIS bafunani ngempela, bengizibuza ukuthi lezi ziphetho zingadluliswa kangakanani emazweni ethu asekhaya lawo amaqiniso awo angafana noma ahluke (mhlawumbe ahluke kakhulu) kunawakho. 'Okuluhlaza' okusetshenziselwe isifundo bekungokunikezwa konke ...
Geospatial - GIS, egeomates yami
I-cadastre encike enjongweni enembile - ukuthambekela, ukusebenzisana, inqubo, noma umbhedo?
Emuva ngo-2009 ngachaza ukwenziwa kabusha kokuhlelwa kwe-Cadastre kamasipala, okwathi ngokomqondo wayo ophakanyisiwe kwaba nenqubekela phambili phakathi kwezizathu zokuthi kungani i-cadastre yamukelwa ekuqaleni ngenhloso yentela, nokuthi lokho kudinga kanjani ukuhlanganisa idatha, abalingisi kanye ubuchwepheshe benziwa ngokuhlanganiswa komongo. Okwe-2014 ...
cadastre, Okufakiwe, egeomates yami, topografia
… Futhi ama-geoblogger abuthene lapha…
Othile kwakufanele enze lowo mqondo wokuhlala esikhaleni esifanayo, iqembu labantu abahluke ngokuphelele ebuntwini, emcabangweni nasenkambisweni yamasiko, kepha engezwe kokuhlukile kokuba yizikhulumi zaseSpain, bakuthanda kakhulu okwenzeka kumongo we-geospatial. Lona yi "I National Geobloggers Meeting", ephakanyiswe kwi ...
Okufakiwe, egeomates yami
Ukuphathwa komhlaba kuzobukeka kanjani ngokuzayo? - umbono weCadastre 2034
Ukuphakamisa ukuthi ukuphathwa komhlaba kungabukeka kanjani ngo-2034 akubonakali kuwumqondo olula, uma sibona ukuthi zingaki izinguquko ezenzekile eminyakeni engama-20 edlule. Kodwa-ke, ukuvivinya umzimba kungumzamo wesibili walokho okwakwenziwe eminyakeni engama-20 ngaphambi kweCadastre 2014. Ukungazinaki lezi zitatimende kungahle kukubize ...
cadastre, egeomates yami
ELuhlelweni Lwavelonkhe Property Management SINAP
Uhlelo Lukazwelonke Lokuphathwa Kwezakhiwo (i-SINAP) luyisiteji sobuchwepheshe esihlanganisa lonke ulwazi oluhlobene nomthombo wezinto ezibonakalayo nowokujwayelekile wesizwe, lapho abalingisi abahlukahlukene bakahulumeni nabazimele nabantu ngabanye beqopha konke ukuthengiselana okuhambisana nempahla yempahla. impahla, edingekayo kumthethosisekelo nasekuguqukeni kwemakethe ...
Okufakiwe, Geospatial - GIS, egeomates yami, Ukuphathwa Land
Lapho kwetfula izincomo LADM
Emisebenzini eminingi esengike ngabamba iqhaza kuyo, ngibonile ukuthi ukudideka okubangelwe yi-LADM akuhlangene nokuyiqonda njengezinga le-ISO, kodwa nokuhlukanisa ubukhulu bayo bomqondo esimweni sayo sobuchwepheshe besimishini. Ngamanye amagama, ukuthi ungayisebenzisa kanjani. Kumele kucace ukuthi i-LADM ayi ...
cadastre, Okufakiwe, egeomates yami, Ukuphathwa Land
I-LADM - NjengoModeli Oyingqayizivele Wesizinda Sokuphathwa Komhlaba - EColombia
Isifinyezo sesethulo esenziwe nguGolgi Alvarez noKaspar Eggenberger e-Andean Geomatics Congress eBogotá, ngoJuni 2016. Isidingo se-Multipurpose Cadastre Ngokuqalisa ukusebenza koHlelo Lokuthuthukiswa Kwezwe 2014 - 2018 nokwakhiwa kwe-National Land Agency I-ANT, umbono wenkambu yoMhlaba ku ...
cadastre, Okufakiwe, egeomates yami
I-Blockchain ne-Bitcoin isetshenziselwa ukuPhathwa koMhlaba
Engqungqutheleni yezobuchwepheshe bolwazi ngathintwa ngumhleli wephephabhuku, wangibuza ngokufakwa kwalolu hlobo lobuchwepheshe endaweni yeProperty Registration, eCadastre naseProperty Administration jikelele. Ingxoxo ibingaphezu kokuthakazelisa, yize bengimangele ngandlela thile ukuthi ungibuze, ngicabanga ...
cadastre, Okufakiwe, Innovations, egeomates yami
I-BIM - Izwe ebengingaliphupha eminyakeni engama-20 edlule
Eminyakeni engama-20 kamuva, ngingahlanganisa iBIM kuphela nokuziphendukela kwemvelo okwakumele ngaleso sikhathi, ngishiya ibhodi lokudweba futhi ngilande iphepha lamafayili e-CAD. Lokho kwakungukuziphendukela kwemvelo okuhlaba umxhwele, uma kubhekwa ukuthi wavela ekubeni ngumdwebi wokudweba kanye nokubala i-notebook wokubala + i-Lotus 123.
Okufakiwe, Ubunginiyela, Microstation-Bentley, egeomates yami
I-BIM - umkhuba ongaphenduki we-CAD
Ngokomongo wethu we-Geo-Engineering, igama elithi BIM (Ukwakhiwa Kwemininingwane Yokwakha) aliseyona inoveli, evumela izinto ezahlukahlukene zangempela ukuba zenziwe, hhayi ekumeleleni kwazo kuphela kepha ezigabeni ezahlukahlukene zomjikelezo wempilo . Kusho ukuthi umgwaqo, ibhuloho, i-valve, umsele, isakhiwo, ...
Izici ezi-6 okufanele uzicabangele ekuhlanganisweni kweRegistry - iCadastre
Ukwenza iCadastre kanye neRegist Property Registry kusebenze njengamanje kungenye yezinselelo ezithakazelisa kakhulu ezinhlelweni zesimanje zezinhlelo zamalungelo empahla. Inkinga imvamisa iyafana, ize iye ngaphesheya komongo wethu waseSpanishi. Ngakolunye uhlangothi, umbono we ...
cadastre, egeomates yami, Leisure / ugqozi
Nsuku zonke amazwe agxila ekuthambekeni kwe-e-government, lapho izinqubo zenziwa lula ekufuneni ukuhlinzeka ngezidingo ezingcono ezakhamuzini, kanye nokwehlisa imingcele yenkohlakalo noma i-bureaucracy engadingekile. Siyazi ukuthi umthetho, izikhungo nezinqubo maqondana nempahla ezweni ngalinye ...
Isimo sendawo sendabuko vrs. LiDAR. Ukunemba, isikhathi nezindleko.
Ngabe ukwenza umsebenzi ngeLiDAR kunganemba kakhulu kunokuhlola okuvamile? Uma unciphisa isikhathi, ngamaphesenti amangaki? Yehlisa malini izindleko? Izikhathi sezishintshile impela. Ngiyakhumbula lapho uFelipe, umhloli wamazwe owayengisebenzela insimu, efika nencwajana enamakhasi angama-25 yezingxenye ezinqamulelayo azokhiqiza nge ...
Okufakiwe, Ubunginiyela, egeomates yami, topografia
Lapho sifunda imibono ehlukene esekela ukuxhumana okubandakanya imidwebo yezithombe, njengesayensi ukumela izinto ezenzeka endaweni, futhi njengobuciko bokunikeza lolu lwazi ubuhle obudingekayo, siyabona ukuthi umzuzu esiphila kuwo ubandakanya izenzo eziningi empilweni yansuku zonke lapho sisebenzisa i-georeference njengesenzo ...
Geospatial - GIS, GPS / Izinsiza kusebenza, egeomates yami
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ... ikhasi 8 ikhasi elilandelayo
Inkambo yeWeb-GIS enesoftware yomthombo ovulekile ne-ArcPy ye-ArcGIS Pro
I-AulaGEO yethula lesi sifundo sigxile ekwakhiweni nasekusebenzisaneni kwedatha yendawo yokusetshenziswa kwe-Intanethi ....